Maxey tahay eedeynta Puntland u jeedisay dowladda Soomaaliya? – Somali Top News
Maxey tahay eedeynta Puntland u jeedisay dowladda Soomaaliya?
December 5, 2018 Somali Top News	0 Comments
War qoraal ah oo ka soo baxay Madaxtooyada Puntland waxaa Eedeyn kulul loogu jeediyay dowladda Federaalka Soomaaliya,iyada oo lagu eedeeyay inay faragelin ku heyso doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo Puntland.
Dhowr qodob ka koobanyahay qoraalka oo lagu sheegay in uusan xilligaan jirin khilaaf ka dhashay Magacaabista Madaxweynaha Puntland Guddiga ansixinta iyo xalinta khilaafaadka Golaha Wakiiladda Puntland,isla markaana doorashada sida loogu talo galay ay ku dhaceyso.
Waxaa War-Saxaafadeedka sidoo kale lagu sheegay in wax khalqal ah aan la gelin Karin doorashada dhawaan ka dhaceysa Puntland,sidoo kalena guddiga khilaafaadka uu Shaqadiisa si wanaagsan u qabsan doono.
← Tarsan oo noqday safiirka Soomaaliya u fadhin doonaa dalka Kenya
Maxey kawada hadleen Duqa Muqdisho iyo dhigiisa Magaalada Garoowe? →
Golaha Aqalka Sare oo ku farxay jawaabtii Xukuumadda Soomaaliya
October 24, 2018 Somali Top News 0
Sidee Somaliland u aragtaa Qunsulkii Itoobiya ay kala baxday Hargeysa?